Eyonaapps ilungileyo yokufunda iJografi kwiselfowuni yakho | Izikhokelo ze-Android
UCristian Garcia | 10/05/2021 08:46 | Imidlalo ye-Android
Ukuba ungomnye wabo bantu babenobunzima bejografi, okanye ngokuchaseneyo, omnye wabo babewuthanda, Sikuzisa uluhlu apho uya kufumana khona usetyenziso lwakho lokufunda iJografi. Enkosi kwezi zicelo uzakuhamba nazo, ungasoloko ufunda iJografi ngalo naliphi na ixesha kunye nendawo. Uya kuzijonga izifundo zakho kunye nabantwana bakho ngendlela emnandi. Kwimeko yeJografi, baya kukunceda uqonde kwaye uphonononge ukusuka kumakomkhulu ukuya kwimilambo yelizwe ngalinye nakwingingqi ngeenkqubo zabo zopolitiko okanye amasiko endawo.
1 Ukhuphiswano lweengqukuva
3 Iphi lonto?
3.1 Funda iJografi- iTrivia
4 IJografi yeHlabathi-Umdlalo
5 I-GeoExpert Lite
6 Umceli mngeni we-Geo-uMdlalo weHlabathi weJografi
Ukuphikisana kwamakomkhulu kuphakamisa imibuzo eyahlukeneyo oya kuyiphendula ngokuchanekileyo kwiintlobo ezintathu zeempendulo ekunokuthi zikunike zona. Isicelo siqukethe imidlalo embalwa: owokuqala unika igama lelizwe kunye namakomkhulu amathathu ahlukeneyo ukuze uyifumane; kwaye kwelinye kuya kufuneka unxibelelanise iflegi nommandla ohambelanayo. Iya kukubonelela ngamathuba okuba ungafunda iimali ezisetyenziswa kwihlabathi liphela kwaye wazi ukuba zibekwa phi. ezikhumbuzo ezininzi ezibalulekileyo Kwilizwe ngalinye.
Ezinye zeempawu zayo ezizodwa zezi:
Tshatisa iiflegi zesizwe ngasinye kunye namazwe abo.
Yazi izikhumbuzo ezahlukeneyo zembali
Funda ngeemali zommandla ngamnye
Funda imimandla yengingqi kunye nezihloko zayo.
Uya kuba namanqanaba ama-5 obunzima.
Uya kufunda amagunya akhethekileyo kuwo wonke umdlalo oya kwenza amava abe mnandi ngakumbi.
Ukuhlaziywa kunye nemifanekiso yanamhlanje.
Iindlela ezili-10 zomdlalo wasimahla, nangaphezulu kwama-24 ukuba uphucula umdlalo.
Umculo ongoyikiyo kunye nezandi.
Yazi yonke indawo yomhlaba ukuba wonwabe.
StudyGe -Jografi kwimephu, iintloko, iiflegi
Insiza iqulethe ifayile ye- imephu yehlabathi yamazwe angama-214, iiflegi zelizwe ngalinye kunye nolwazi oluneenkcukacha kwilizwe ngalinye, ezinje: ngabemi, iilwimi, uhlobo lukarhulumente; kunye namaphepha emibuzo aya kusebenza njengovavanyo lokuphononongwa kulwazi osele ulufumene. Ukongeza kuko konke oku kungentla, isicelo sikwakuvumela ukuba uphonononge ukuba ngawaphi amazwe anomda ofanayo kunye nomnye. Iyafumaneka kuzo zombini i-Android kunye ne-iOS.
Isixhobo esinomdla wesicelo kwaye esiya kukunceda kunye neapp yokufunda iJografi, njengemephu, kunjalo iatlasi zehlabathi. Ungasisebenzisa isicelo njengeglobhu yedesktop, apho unokufumana ulwazi oluninzi malunga nawo onke amazwe, anjengeeflegi zawo nezihloko zawo.
Imephu yehlabathi enamazwe angama-229.
Funda iiflegi zawo onke amazwe.
Ulwazi olunabileyo nolubanzi malunga nelizwe ngalinye njenge: abemi belizwe, imali, uhlobo lworhulumente.
Isicelo Siphi eso? Yahlulahlulwe yangamacandelo ahlukeneyo ngokomxholo wayo: inkcubeko, ilizwekazi, amazwe (apha nawo ahlelwe ngawona makhulu ehlabathini, eMntla Afrika, kuMbindi Mpuma ...), nakwimimandla yomanyano kunye nezixeko. Ukongeza, esi sicelo sinika iintlobo ezintathu zeemephu ngokoncedo, ngokucacileyo okanye ngombala; kwaye wongeze kuloo nto, iintlobo ezintathu ezahlukeneyo zomdlalo okanye indlela yokudlala: abangatshatanga, abadlali abaninzi, imibuzo okanye khetha inqaku kwimephu. Esi sicelo sigqamile kwiimowudi zemidlalo eyahlukeneyo neyonwabisayo.
Ezinye zeempawu zayo eziphambili zezi:
Iindidi ezimbini ezahlukeneyo zemephuumbala kunye nokucacileyo.
Ungadlala kwimowudi engaxhunyiwe kwi-intanethi. Awudingi ukuba unxibelelwano lwe-intanethi.
Uya kuba nakho ukwabelana ngeakhawunti kuba isetyenziselwa izinto ezininzi.
Zonke iindawo ziyafumaneka ngeelwimi ezili-11 (isiNgesi, isiJamani, iSpanish, isiFrentshi, isiTaliyane, isiJapan, isiKorea, isiTshayina, isiDatshi, isiPhuthukezi nesiRashiya).
Unokufunda iWikipedia ukuze ufunde okungakumbi ngendawo nganye oyikhethileyo.
Isicelo sibonelela ngokuthenga ngaphakathi kuyo, kwaye iqulethe iintengiso apho baya kukunyanzela ukuba ubukele iividiyo. Unokuzikhuphelela uninzi lweendidi simahla kodwa ukuba ufuna ukususa zonke iintengiso kunye Ukuze ukwazi ukudlala wonke umxholo, kuya kufuneka uthenge umrhumo owenziwe ngaphakathi kosetyenziso.
Funda iJografi- iTrivia
Umthuthukisi: Ukufunda kwam
Funda iJografi ngumdlalo wabo Baxelisa umdlalo webhodi ongenamsebenzi, obona bonke ubomi. Esi sicelo sokufunda iJografi sinaso amanqanaba amane ahlukeneyo eya kuvavanya ulwazi lwakho ngesihloko. Indlela esenziwe ngayo isicelo isekwe kwinto yokuba ngexesha lombuzo ngamnye ikubonisa imephu yezopolitiko, kwaye kwakhona, enye ebonakalayo, apho kuya kubakho khona ukufumana ilizwe ngalinye, imilambo, iintaba, imimandla, iintlango kunye nezinye izinto izinto ezifundwayo kulo mbandela.
Funda iJografi iindlela ezahlukeneyo zokudlalaImowudi yomdlalo, apho kufuneka ufumane amanqaku ali-10 eendawo okhethwe ngumdlalo, enye indlela yomdlalo ebizwa ngokuba yimowudi yokuziqhelanisa, ekuvumela ukuba ukhethe iindlela ezahlukeneyo zokufunda, ezinje ngokufunda amanqaku eendawo, iintloko ngendlela engacwangciswanga okanye ukuphonononga imephu kunye neendawo zayo ngokuthanda. Sisicelo esifumaneka kuphela kwi-Android kwaye uya kuyifumana kwiVenkile yokudlala kaGoogle.
Inkqubo yokufunda yeJografi ifumaneka simahla kwiilwimi ezahlukeneyo: IsiNgesi, isiJamani, isiFrentshi, isiTaliyane, isiPhuthukezi, isiRashiya, isiDatshi, isiPolish, isiArabhu nesiTshayina. Ungayikhuphela kwiVenkile yeGoogle Play.
Umthuthukisi: Imidlalo ye-Atom
IJografi yeHlabathi igubungela umxholo obanzi kwaye ubanzi oquka idatha entsonkothileyo efana negama elibizwa ngokuba yi-GDP yelizwe, ingeniso yomntu ngamnye, ixesha lokuphila, iminyaka yobudala yelizwe, inkolo abazibizayo okanye isiqubulo esithile selizwe ukuba besinayo. Njengoko sibona, sisicelo esigqibeleleyo, esinedatha entsonkothileyo, enika umdlali imidlalo kunye ukuya kuthi ga kwimibuzo engama-6.000 encediswe yimifanekiso kunye namanqanaba amane obunzima eyahlukileyo. La manqanaba aya kwahlulwa-hlulwa abe: amazwe, iziqithi, imimandla okanye inqanaba lehlabathi phakathi kwabanye abavela kumanqanaba amaninzi esi sicelo esisibonelelayo. Ngokuqinisekileyo yenye yeendlela ezilungileyo zokufunda iJografi kwelinye inqanaba.
Ezinye zeempawu zeJografi yeHlabathi zezi:
Imibuzo engama-6000 enemigangatho emi-4 yobunzima
Ngaphezulu kwe-2000 yemifanekiso eyahlukeneyo malunga namazwe
Amazwe angama-400, kunye nemimandla kunye neziqithi
Gqibezela iimpazamo zakho kumdlalo ngamnye
Umthuthukisi: ISierra Chica Software SL
Phakathi kwemidlalo ebandakanywa yiGeoExpert Lite unokufumana: qikelela iintloko kunye neeflegi, uya kuba nenye into ekufuneka uyazi ukuba uwafumana njani na amazwe nemimandla, kwaye ufumane imilambo kunye neentaba. Ukongeza koku, ikwanazo nezifundo ezinolwazi ngemibuzo kunye nemidlalo ojongana nayo, kubemi okanye kubuninzi bendawo nganye ehlabathini. Isicelo siqulathe ezinye iinguqulelo ezijolise kumazwe athile anjengeSpain, iRussia, iUnited States okanye iMexico. Uya kuyifumana kwi-iOS, kwiVenkile ye-Apple nakwiivenkile ze-Android, Google Play Store.
IGeoExpert inokuthi ithathelwe ingqalelo njengesixhobo esihle semfundo sokonwaba nokudlala nayo, eyilelwe ukufunda iJografi kubandakanya onke amazwe ehlabathi. Isicelo sihlaziywa rhoqo kwaye umxholo waso ngumgangatho ongqongqo. Abaphuhlisi baxela ukuba kunjalo esetyenziswa kwizikolo ezahlukeneyo eSpain ukufundisa isifundo seJografi.
Ngendlela, usetyenziso alunakuthengwa ngaphakathi kuyo, kwaye awuyi kubona ntengiso okanye omnye umxholo ocaphukisayo, ke unikwa njengomgqatswa wolona hlelo lokusebenza lubalaseleyo lokufunda iJografi.
Umceli mngeni we-Geo-uMdlalo weHlabathi weJografi
Ngomdlalo weGeography weJografi yeHlabathi yeJografi, ukongeza ekufundeni iJografi, eyona njongo iphambili yazo zonke ezi zicelo, ikunika ithuba lokuba ukwazi ukwenza isifundo seJografi ngesiNgesi. Inqaku elincamisayo ukuba kude kube ngoku alikhange lithathelwe ingqalelo sesinye isicelo.
Ngumdlalo wombuzo, ukwadlalwa ngendlela engabalulekanga. Imibuzo iya kujongana nejografi yehlabathi kunye nokwahluka kwayo. Inemizobo, oopopayi kunye nemibuzo ethile (nganye ithatha malunga nomzuzu omnye) ukuvavanya ulwazi onalo malunga: iiflegi, imida yelizwe ngalinye, ezona zixeko zibalulekileyo, iindawo ezidumileyo kunye nezikhumbuzo ezaziwayo. Ye-Android kunye ne-iOS.
Izikhundla ezikwi-Intanethi kunye nempumelelo kwiVenkile yeGoogle Play
Uqeqesho. Qeqesha umdlalo ngamnye ngomdlalo omncinci ngaphambi kokuba uthathe umdlalo omiselweyo.
Iprofayili kunye nempumelelo yakho kunye nemingeni ephunyelelweyo
Ukuthenga ngaphakathi nohlelo
Qwalasela umculo kunye nezinye iindlela zokwenza amava emidlalo ukuba onwabele
Kufuneka kuthiwe le sicelo inayo ukuthengwa ngaphakathi kuyo, kwaye oko enye yezinto ozithathayo xa usenza oko kuthenga iya kuba kukususa iintengiso kunye nentengiso ukuba ungaphakathi kuyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Izikhokelo ze-Android » Imidlalo ye-Android » Eyonaapps ilungileyo yokufunda iJografi kwiselfowuni yakho